Xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf oo lagu waraystay madasha 60ka |
Xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf oo lagu waraystay madasha 60ka
Waraysiga oo dhinacyo badan Taabanaya ayaa waxaa qaaday wariye Farxaan Axmed Nuur ee nala dhagaysta..Xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf oo lagu waraystay madasha 60ka
Marka hore waan iskiin-barayaa oo magaceygu waa Maxamad Cali Yuusuf. Ma´aan ihi nin Jubaland ku cusub. Waxaan ahay nin degaankan u-dhashey kuna soo bar-baarey. Waxaan ahay nin kamid ah xubnihii sida fir-fircoon u taageeray dhismaha dowlad-goboleedka Jubbaland. Waxaan ahay xubin kamid ah barlamaanka Jubaland.
Haddii aan ku hormaro sadexda tiir ee waajibaadka shaqo u ah Xildhibaan waxay kala yihiin:
Sharci dejin (Legislation)
Qodobka 31aad : (Dastuurka Jubaland) Awoodaha iyo Masuuliyaadka Baarlamaanka Dawlad Goboleedka Jubaland.
Faqraddiisa 2-aad: (waxay oraneysaa) Baarlamaanku wuxuu matalaa masaalixda deegaannada laga soo doortay xildhibaan kasta oo xubin ka ah golaha Baarlamaanka Jubaland.
Inkastoon ahay Xildhibaan Jubaland misana waxan matalaa oo golaha Barlamaanka Jubaland magacooda iyo wakaaladdooda ku fadhiyaa beesha Harti oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan Jubaland. Markan arko duruufaha qalafsan, dib u-dhaca iyo dhibaatooyinka regaadiyey beesha Harti iyo garasho la’aanta ama tayo xumida madaxda iyo Xildhibaanada beesha Harti/Jubaland waxan soo xusuustaa oraahda oraneysa!
Marka hore waxan inyar ka taabanayaa taariikhda beesha Harti/Jubaland.
Beesha Harti/Jubaland waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ee fara ku tiriska ah oo laga dheehan karo sooyaalka taariikhda Jubaland. Laga soo billaabo qarnigii 17-aad badmareenadii, maamuladii Islaamka iyo gumeystayaashiiba waxay kula kulmi jireen xeebaha Gobolka J/hoose. Waxayna heshiisyo amni iyo wax wada qabsi la gali jireen xooggaggaas ajaanibta ahaa ee damaca ka lahaa deegaankan. Heshiisyadaas oo uu ka mid ahaa midkii Saciid Barqash waxa maanta laga heli karaa xarumaha lagu keydiyo qoraalada iyo taariikhda caalamka sida Muusimyada iyo Madxafyada. Waxa kaloo daliil cad u ah gun-dheerida taariikhda Harti/Jubaland qoraalka uu qoray Lorian Swamp oo ahaa ((British colonial officer), buuggiisa uu qoray 1914 oo lagu magacaabo “THROUGH JUBALAND TO THE LORIAN SWAMP” boggagga 61-66. Buuggan waxaad ka daalacan kartaa (GOOGLE-ka).
Beesha Harti/Jubaland waxay qeyb libaax ka soo qaadatay xoreyntii guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Gobolada Jubaland laga xoreeyey gumeystihii ku soo duulay. Waxa cad oo misana la hubaa inay tahay beeshii laf-dhabarka u ahayd xisbigii keenay gobanimada Soomaaliyeed ee la oran jiray SYL, iyagoo gaar ahaan ka furay xarumahii xisbigaas goobo fara badan oo ku yaal gobolada Jubaland. Sidoo kale waxay halgan dheer u soo galeen ka xoreyntii gumeystaha ee goboladan, iyagoo naf iyo maalba u soo huray.
Marka laga yimaado dagaaladii deeganadan loogaga xoreeyey gumeystayaashii ku soo duulay, waxa dhab ah oo marag ma doonta ah in beesha Harti/Jubaland ay deegaankan ku mintidday difaaciisa xilligii uu socday dagaalka sokeeye ee Soomaaliya, kaasoo ujeedadiisu ahayd dhul-doon. Maadaama qodobka ugu hilinka culus dagaalkan uu ahaa deegaan-boob. Beesha Harti/Jubaland waxay ahayd tii u baabac-dhigtay kana hortagtay hadafkii dhul-doonka ahaa ee lala damacsanaa in lagu dhaxal wareejiyo deegaankan, kaasoo sida hirarka isu daba yiil, difaacaas adag oo ay beesha Harti/Jubaland ku wiil iyo waxaad weysey waa midka hadda keenay in deegaankan intiisa badani ay gacanta ugu jirto DGJL.
Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo Md. Axmed Maxamed Islaan loogu doortay inuu madaxweyne ka noqdo 15/05/2013, mar labaadna la doortay 15/08/2015, beesha Harti gudo (JL & PL) iyo dibadba waxay la garab istaagtey maskax, muruq iyo maalba, ilaa iyo maantana waxay si hagar la’aan ah ugu heellan tahay taabo-gelinta mabaadiidii lagu asaasay dowladda goboleedka Jubbaland.
Qaybta kore waa qayb yar oo ka mid ah warsaxafadeed uu horay usoo saaray Maxamad Cali Yuusuf.
Haddaba maalintii shalay ayaa xildhibaanada Jubbaland kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen la sheegay in xilkii xildhibaanimo iyo xasaanadiiba laga xayuubiyay Xildhibaan Maxamad Cali Yuusuf.
Wareysi dheer oo uu kaga jawaab celanayo ayuu bixiyay Xildhibaan Maxamad Cali Yuusuf